एनआरएनएको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक, कसले कति मत पाए ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १३:३४ English
एनआरएनएको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक, कसले कति मत पाए ?
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १ कार्तिक । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणम सार्वजनिक भएको छ । संघको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । प्रतिस्पर्धी कुल आचार्यलाई पराजित गर्दै उनी संघको नवौँ विश्वसम्मेलनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
पन्त यसअघि २ कार्यकाल एनआरएनएको आईसीसि उपाध्यक्ष बनिसकेका थिए । विजयी पन्तले कुल १ हजार २१७ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी आचार्यले जम्मा १ हजार ७० मत पाएका छन् । बिहिबार भएको मतदानमा कुल २ हजार ३४१ मत खसेको थियो।
त्यस्तै अध्यक्ष सहित अन्य पदमा समेत कुमार पन्त समर्थकको बर्चश्व देखिएको छ । उपाध्यक्षमा बद्री केसी रसिया, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ बेल्जियम, सोनम लामा अमेरिका, मन केसी अष्ट्रेलिया, रविना थापा निर्वाचित भएका छन ।
त्यस्तै महासचिवमा डा. हेमराज शर्मा अमेरिका, सचिवमा गौरी जोशी अमेरिका, सचिवमा आरके शर्मा कतार, कोषाध्यक्षमा महेश श्रेष्ठ, सह कोषाध्यक्षमा लोक दाहाल र निर्वाचित भएका छन ।
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:१२ मा प्रकाशित
शुक्रबारबाट विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्दार सुरु हुँदै	२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:४६
स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै	२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १८:५८
बुधबार २०१ जना कोरोना संक्रमित थपिए	२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:४८
विदेशमा रहेका नागरिक फर्काउन प्राथमिकता निर्धारण, को को पाउँछन् फर्किन ?	२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १०:१९
नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान	२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १०:१५
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए २३९ संक्रमित यससंगै नेपालमा कुल संक्रमित संख्या १८११ जना पुग्यो	१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार २३:०१
कोरोनाका कारण थप १ जनाको मृत्यु
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:४९
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक मन्त्रालय तानिए
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:१५
शुक्रबारबाट विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्दार सुरु हुँदै
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:४६
काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायका अनुसार..
व्यवसायीले गरे लकडाउन उलङ्घनको घोषणा
काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवसायीहरुले लकडाउन उलङ्घनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आह्वानमा..
कर तिर्ने समय थपियो
काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले कर तिर्ने अवधि थप गरेको छ । व्यवसायीहरुहरु आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने समय थप..
कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेकोप्रति चेम्बरको असन्तुष्टि
काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेकोप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले असन्तुष्टि जनाएको छ । ७० दिनदेखि..